Soo dejisan Anki 2.0.36 – Vessoft
Soo dejisan Anki
Anki – software ah in uu korka text ah, image iyo warbixin maqal ah. software waxa uu isticmaalaa hab caqli leh oo wax baraya, taas oo ku salaysan yahay isku geynta ee aaminin bareeg. Ujeedada ugu weyn ee Anki waa caawimada barashada luqadaha ajnabiga ah iyo muuqaalada dheeraad ah in uu korka xisaabta qaaciidooyinka kiimikada, , macluumaadka tirakoobka, iwm Sidoo kale Anki aad u ogolaanaya in ay ku xidhmaan daro ah oo ka codaysay karaa kaararka u dhexeeya qalabka kala duwan oo ay isticmaalaan software ee internet-ka.
Barashada luqadaha kala duwan
Tababarka ee xasuusta muuqaalka iyo maqalka
Abuur kaararka adiga kuu gaar ah
Anki Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... GeoGebra 5.0.282
العربية, English, Українська, Français... WordWeb 7.1
العربية, English, Français, Español... Crypto! 4.2
Waxbarashada Software in ay ku daydaan ciyaarta ku dalwaddii MIDI-keyboard. Software ayaa u saamaxaaya in ay go'aan ka tonality ee music iyo astaysto qalabka muusikada baahida isticmaalaha.
Any Video Converter 6.0.4 Ultimate iyo Professional
العربية, English, Français, Español... WinPcap 4.1.3
PDF Software in la abuuro oo la shaqeeya ee PDF-files. Software wuxuu taageeraa abuurka PDF files-ka codsi kasta oo ku jira shaqo print ah.
Kadib browser ayaa caan ka Apple Inc. software waxay leedahay farsamooyinka sare iyo qoreysa hawlgalka fudud ee internet-ka.